आश्वासन पायौँ, आशा पूरा भएनन् - Pradesh Today आश्वासन पायौँ, आशा पूरा भएनन् - Pradesh Today
पुष १३, २०७५ सपना बोहरा
नेतालाई राजपुरबासीको गुनासो …
घोराही, १३ पुस । राजपुर गाउँपालिका कुनै बेला अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरुको आश्रयस्थल थियो । जतिबेला उनीहरूले भनेका थिए हाम्रो सत्ता आएमा गाउँको कायापलट हुन्छ हाम्रा अधिकारी स्थापित हुन्छन् । तर यो आश्वासन अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । शसस्त्र द्वन्द्वकोे समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री अहिलेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अनि सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई लुकाएको ठाउँ अर्थात आश्रय दिएको ठाउँ राजपुर अहिले आशामा मात्रै छ । अनि त्यहि गाउँ हो नेपाली सेनालाई यहाँ विद्रोही पक्षको कोही आएका छैनन् भनेर गलत सूचना दिएर फर्काउने र उनीहरूको रक्षा गर्ने । राजपुर त्यतिबेलाको भन्दा अहिलेसम्म केहि फरक छैन । अनि उहि हो सडक जहाँ लास र घाइतेहरूलाई सीमा कटाइने गरिएको थियो । अनि उहि हो स्वास्थ्य चौकी जहाँ द्वन्द्वको समयमा पनि उपचार नपाएर त्यही मृत्युवरण गरेका योद्धाहरू । अनि उस्तै छ स्कुल जुन द्वन्द्वको समयमा तहसनहस पारिएको । अनि उस्तै छ बस्ती जहाँ टुकी मुनि नेताले देखाइएका सपना । अहिले सेतो माटो र राता कमेरो पोतिएर घरको भित्ता मात्र फेरिएको छ । छानो उस्तै छ । उनीहरु सुतेको खरले छाएको घर अहिले त्यो खर गलेर पूरै कालो छ । फेरिए केवल गालाका मुज्जाहरु, जो गाला चाउरिएर मुज्जा–मुज्जा परेका छन् । अनि फुलेका छन् कपाल । सशस्त्र द्वन्द्वको सयममा घाइते बोकेर सीमा पार गराउने, उपचार गराउन स्वास्थ्य चौकीमा पु¥याउने ति युवा जोसमा लक्ष्मीप्रसाद बुढा अहिले बृद्ध अवस्थामा छन् । एउटा झिनो आशा राखेर । गाउँको विकास । बृद्ध अवस्थामा दुःख गर्नु नपर्ने । अर्काको गुलामी गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने अनि घरको आँगनमै पानीको धारा र मोटर उडाउने । यस्तै–यस्तै झिना आशामा दशकौँ बितिसकेको छ । त्यो समयमा रातदिन नभनेर खाना पकाएर खुवाएको, आफू भुईमा सुतेर खाटमा सुताएका, आफू भोकै बसेर नेताहरु खाना खुवाएकाहरू जस्ताको तस्तै छ । बुढाले भने हामी आशामा मात्रै छौँ विश्वास त सबै उनैले लगिसके ।
त्यही घरमा आश्रय लिनेहरू प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री नभएका होइन् अनि कृष्णबहादुर महरा अहिले सभामुख छन् भने प्रचण्ड पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष समालिरहेका छन् । अनि देउखुरी नेपाली काँग्रेसका स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री थिए । यी सबैले आशा देखाउने मात्रै काम गरे । त्यसपछिका चुनावमा नेपाली काँग्रेसकी पार्वती डिसी चौधरी, तत्कालीन नेकपा माओवादीका ईन्द्रजित थारु हाल प्रदेशसभा सभा सदस्य ईन्द्रजित थारु, प्रतिनिधि सभा सदस्य ईन्द्रजित थारु अहिले आशा देखाउने मात्रै काम भईरहेको राजपुरबासीको गुनासो छ । राजपुर गाउँपालिकाकी पेमा राना एक सय वर्ष पुग्न दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । त्यही खरको छानामा बस्नेहरु अहिले सिंहदरबार छन्, प्रधानमन्त्री भए तर उनीहरुलाई आश्रय दिनेहरुको जीवन कहिले फेरिएन् । बृद्धा पेमाले धेरै कुरा बिर्सिसकेकी छन् । उनी बिरामी परेको बेला अस्पताल लैजानको लागि सडक छैन्, एम्बुलेन्स छैन् अनि अस्पताल छैन् । केही दिन पहिला घरको पेटीबाट नराम्रोसँग लडिन । छोराले उनलाई धेरै पटक कन्नोमा (ढाड) बोकेर लमही अस्पतालामा पु¥याएका छन् । ‘अस्ती लडेर नाक मुखबाट रगत बगेछ, छोराले अस्पतालमा पु¥यायो’ उनले त्यो बेला निकै भावुक हुँदै भनिन् ‘बरु माटोमै मरेको भए कसैलाई अस्पतालसम्म पु¥याउनु पर्ने सास्ती हुने त थिएन् ।’ उनी मोटर अनि बत्ती नदेखेर नै प्राण जाने भयो भनेर चिन्तित छन् । ‘साझ के खाउँ ? बिहान के खाउँ ? को अवस्था थियो’ राजपुर गाउँपालिकाका चमारे गाउँका लक्ष्मीप्रसाद बुढाले खरको छानो देखाउँदै विगत सम्झदै भने ‘यही घर हो हामीले आश्रय दिएको ।’
तत्कालनीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट निकै सास्ती पाएको उनी सम्झन्छन् । खेतमा हलो जोत्नु पर्दैन ? मेसिनले जोत्छ, खरको छाना होइन्, टिनको छाना हुन्छ भनेर यस्तै यस्तै मिठा सपना देखाउथे’ उनी भक्कानिदै भने ‘नेताहरूले विकास गर्लान् भनेर भोकै बसेर खाना खुवाएको छु कति पटक ।’ राजपुरबासीहरुलाई सशस्त्र द्वन्द्वको समय सपना देखाउने प्रचण्ड, बाबुराम अनि महरासँग होईन्, त्यसपछि भएका दुईवटा निर्वाचनमा जितेर गएका नेताहरुसँग पनि आक्रोसित छन् । ‘मेरो त नाम्लो, छिटुवा अनि सल पनि रहेन्, द्वन्द्वको समयमा बिरामी बोक्न चाहिन्छ भनेर लगेका थिए’ राजपुर गाँउपालिकाकी निर्मला बुढाले विगत सम्झदै भनिन् ‘आमा हाम्रो सत्ता आयो भने नयाँ सल ल्याएर आउँछौँ ।’ न त सल आयो न ति नेताहरू फर्केर आए । शान्ति सम्झौता भएपछि एकपटक पनि फर्खेर नआएको उनले दुखेसो पोखिन् । ‘गत वर्षको निर्वाचनमा घरमा निको छाना लगाउँछौँ भनेर आशा देखाए, अहिले फर्केर आएनन्’ उनले निराश हुँदै भनिन् ।
गतवर्षको निर्वाचनमा पनि गाउँलेहरूले खाना पकाएर खुवाएको, चुनाव प्रचारप्रसार गर्नको लागि घरमा आश्रय दिएको समेत सम्झिन् उनले । ‘चुनाव जितेपछि मेटमणि सर (प्रतिनिधि सभा सदस्य) चुनाव जिताएको भन्दै धन्यवाद दिन आउनु भएको थियो’ उनले भनिन् ‘त्यसपछि देखिनुभएको छैन् ।’ सबै नेताहरू राजपुरलाई केन्द्र बनाउने मात्रै बनाउने तर उपेक्षा गर्ने गरेको उनले बताइन् । राजपुरमा सडक, बत्ती, खानेपानी, सिंचाई, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका मुख्य समस्याहरू रहेका छन् ।
राजपुरबासीहरुलाई सशस्त्र द्वन्द्वको समय सपना देखाउने प्रचण्ड, बाबुराम अनि महरासँग होईन्, त्यसपछि भएका दुईवटा निर्वाचनमा जितेर गएका नेताहरुसँग पनि आक्रोसित छन् ।
राजपुरमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेताहरु प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरादेखि काँग्रेस नेता स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्का, पार्वत डिसी चौधरी, पूर्व एमाले नेता तथा हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरी राजपुरबासीलाई आशा देखाउने मात्रै काम भएको छ । तर उनीहरूको दिनचर्या उस्तै छ ।
गुनासो गर्ने मौका दिनौँ ः जनप्रतिनिधि
राजपुर गाउँपालिकाको विकासको लागि सञ्चारको भूमिका विषयमा छलफल गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले त्यहाँ पुगेका गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष लगायतका सरोकारवाला तथा स्थानीयबासीहरूसँग छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा स्थानीयबासीहरूले नेताहरूले विकास गर्छौ भनेर आश देखाउने मात्रै काम गरेको गुनासो पोखेका थिए । राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा विद्युत, सडक, स्वास्थ्यको समस्या भएकाले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले गाउँपालिकाको सीमित श्रोत र साधन प्रयोग गरेर विकासका कामहरू अगाडि बढाएको बताएका थिए । गाउँपालिका यसै वर्षदेखि स्वास्थ्य चौकीमा विशेषज्ञ डाक्टर र स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक पर्ने आधुनिक मेसिनको समेत व्यवस्था गरिएको उनले बताए । गाउँपालिका नाकासम्म ट्रयाक खोल्ने मुख्य काम भएको र त्यसपछि अन्य कामहरु गर्दै जाने बताए । आफ्नो समयावधिभर यहाँका जनतालाई गुनासो गर्ने मौका नदिने बताएका थिए । ‘पहिलो वर्ष विकासको योजना, बजेट पास भयो’ उनले भने ‘अबको समय भनेको विकासको हो, तपाईलाई गुनासो गर्ने मौका दिने छैन् ।’ राजपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले काठ र वन पैदावार प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकाको बाडफाँडले गर्दा गाउँपालिकाले राजस्व संकलन नउठाएको बताएका थिए । इआईए प्रतिवेदन अनुसार ढुंगाजन्य वस्तु उत्खनन् गर्नको लागि एक करोड बढीको टेण्डर खोलेको जानकारी गराएका थिए । राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा कम बजेट परेको बताए । ‘हामीसँग आम्दानी श्रोत न्यून छ’ उनले वडाबासीहरुलाई जानकारी गराउँदै भने ‘वडामा बजेट पनि कम छुट्याएको छ ।’ अर्को वर्षदेखि वडाबासीहरुलाई गुनासो गर्ने मौका नदिने गरी काम गर्ने उनले बताए । सडकको लागि आएको बजेट नपुगेर विद्युतमा खर्च गरेको जानकारी गराएका थिए । पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
पानीको समस्यामा दृष्टिविहीन परिवार